Kazakhstàna, Nosamborin’ny Polisy ny Lehilahy Iray Nizara Vola Tsy Misy Tambiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2017 5:59 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Ελληνικά, Español, Türkçe, Aymara, Français, عربي, 繁體中文, 简体中文, English
Vola taratasy 10.000 tenge , misanda 30 dolara. Wikimedia commons.
Tany Kazakhstàna, lehilahy iray nijoro teo amin'ny sisin-dàlan'i Almaty, tanàna iray lehibe indrindra, nitondra vola taratasy tenge fampiasa ao amin'ny firenena, misy ny anarany misoratra eo aminy, ary marika iray milaza fa na iza na iza mila azy ireny dia afaka makà azy. Efa azo nosainina mialoha ny ho vokatra farany tamin'ity toa andràna sosialy tao aminà fanjakàna polisy ao Azia Afovoany ity.
Raha nisambotra azy ny polisy dia mety ho valin'ny fitarainana nataonà olona iray nandalo teo, na nihetsika tamin'ny anarany manokana. Ny feo avy amin'ny fifandraisan'ny polisy nisongadina tao anatin'ny fandraisampeo dia nampiasàna ny teny Rosiana “sambory lery” toy ny hoe sarotra ery ny “fisamborana” lehilahy iray mijoro eo amoron-dàlana sady mizara vola.
Ilay polisy miresaka amin-dranamana any amin'ny faran'ilay rakipeo dia manontany azy raha toa izy manana antontan-taratasy hanaporofoany fa manampy ny vahoaka, sy hoe mpikambana anatinà sekta ve izy na tsia. Mamaly ilay rangahy: “Sekta inona? Mila manana antontan-taratasy ve aho mba hanampiako olona?”
Tsy nanaraka izay tohiny taorian'ilay fisamborana intsony ny mpampahalàla vaovao, saingy ireo mpampiasa Youtube kosa tena nanohana betsaka an'ilay rangahy :
Sady matahotra no be fialonana ireo polisy.
Mahatsikaiky, toeram-pivarotana iray lehibe maro rantsana ao Kazakhstàna no noderaina, tsy ela akory izay, noho ny nanomezany maimaimpoana ho an'ireo mahantra mofo sy vokatra hafa vita tamin'ny lafarinina, miainga avy amin'ny hevitra mitovitovy amin'ny hoe “raiso izay ilainao”. Mitohy mizaka fihisaran'ny toekarena i Kazakhstàna noho ny fitsitontongan'ny vidin'ny solika izay efa very sasaka hatramin'ny 2014, sy ireo vokatra fanodina fototry ny fanondranany mankany ivelany.